Xiisada Ganacstada Gaadiidka Yaryar Dekeda Berbera Oo Cirka Isku Shareertay Iyo Cida Iska Leh Shirkada Qadraaska Ku Qaadatay Ganacsatada Baaburta Yaryar Somaliland | Saxil News Network
Xiisada Ganacstada Gaadiidka Yaryar Dekeda Berbera Oo Cirka Isku Shareertay Iyo Cida Iska Leh Shirkada Qadraaska Ku Qaadatay Ganacsatada Baaburta Yaryar Somaliland
Hargaysa (Saxil News.com)-Xiisada Ganacstada Gaadiidka Yaryar Dekeda Berbera Oo Cirka Isku Shareertay Iyo Cida Iska Leh Shirkada Qadraaska Ku Qaadatay Ganacsatada Baaburta Yaryar Somaliland.
Wasiirka Wasaaradda Howla Guud, Gaadiidka iyo Guri-yeynta Xukuumadda Somaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo shalay Saxaafadda kula hadlay Xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada lacag ka baxsan Nidaamka Maaliyadda dalka oo lagu soo rogay Gaadiidka dibada laga keeno iyo ka gudaha dalka lagu wato, taasoo qandaraas lagu siiyey Shirkad aan dawli ahayn oo xafiis ka dhex furatay Dekedda Berbera.
Wasiir Khaliif, ayaa ku tilmaamay Lacagta laga qaadayo Gaadiidka mid Mushqaayad ah oo ay heshiis ku yihiin Shirkadda fulinaysa Mashruuca hubinta tayada Gaadiidka oo u muuqda qorshe lagu abuurayo dhaqaale, balse aan waafaqsanayn nidaamka Caalamigaa ee looga hortago waxyeelada Baddeecadaha iyo agabka kale ee Ganacsatadu dibadaha ka soo dejiso, kaasoo ah hanaanka Tayo dhowrka oo ah Masuuliyad dawlad kasta saaran si ay nabad-gelyada shacbigeeda u sugto.
Wasiirka Wasaaradda Howlaha guud Cabdirisaaq Khaliif, isagoo daba socda cabasho ka soo yeedhay Ganacsatada Baabuurta soo dejisa oo meel adag iska taagay bixinta lacagtaas, waxa uu ku doodday “Nidaamkani waa mid caalamiya oo sanadkiiba mar la sameeyo. Waa mid dan u ah Dadka iyo dalka oo lagaga badbaadinayo bulshadeena waxyeellada gaadiidka aan tayadoodu wanaagsanayn.” Ayuu yidhi. Waxaanu intaas raaciyey “Gaadiidka marka la tijaabiyo Lacagta laga qaadayo qofka, waxa qaadanaysa Shirkadda Maal-gelisay howshan, waa mushqaayad dawladduna waxbay ku leedahay lacagtaas”. Ayuu caddeeyey. Waxa kale oo Wasiirku ku andacooday inaanay Ganacsatada Gaadiidka soo dejisaa marna uga soo caban lacagtan, isagoo xusay inay diyaar u yihiin dhegeysiga cabashada ka soo yeedhay, wax kasta oo macquul ahna soo dhaweynayaan xukuumad ahaan.
Hadalka Wasiirkan ayaa ka dambeeyay, kaddib markii Mulileyaasha Macdaarada Baabuurta lagu Iibiyo iyo Dad kale ee Gaadiid halkaa uga soo degay ay diideen inay bixiyaan Lacagta lagaga qaadayo Shay-baadhka Baabuurta, taasoo ay ku tilmaameen mid sharci daro ah oo aanay awoodin bixinteeda, isla markaana aan wax la-tashiya lagala samayn soo dejinteeda.
Shir jaraa’id oo ay Arbacadii ku qabteen Magaalada Hargeysa Mulkileyaasha Macdaaradu, ayaaa waxay ku sheegeen inaanay aqbali doonin lacagtaas, kuna diidan-yihiin laba arrimood, labadaba. Waa marka koowaade waxay sheegeen inay waddanka keenaan Gaadiid Mustacmal ah oo aan cusbayn, kaasoo marka ay soo iibsanayaan ay iska soo tijaabiyaan tayadiisa. Qodobka labaad ee ay u cuskadeen diidmada bixinta Lacagta, ayaa waxay ku sheegeen “waxa nala qaadaa Cashuur xad-dhaaf ah oo aanaan qaadi Karin iyo toban lacagayow oo kale, waxaan soo dejinaana waa Baabuur marka horeba la soo isticmaalay, markaa ma bixin karno, mana bixinayno lacagtaas”sidaas waxa GNA u sheegay Guddoomiyaha Ururka Macdaarada Ibraahim Cabdi Xuseen.
Maxamed Yuusuf Aadan oo ka mida Mulkileyaasha Macdaarada, ayaa isna shirka jaraa’id ka sheegay inay talaabada lacagta qayrul sharciga ah loogu soo rogay u arkaan culays aanay qaadi Karin oo la saarayo, taasoo aanay dhankooda u hogaansami doonin. “ annagu ilaa shalay ayuunbaan ogaanay arrintan oo la yidhi lacagtaa bixiya, anaguna waanu diidnay oo Baabuurtii kamaanu soo saarin dekedda.” Ayuu yidhi.
Wuxuu intaas ku daray “Ninbaa Geerash ka dhex furtay Dekedda, oo lacag khasab ah dadka looga qaadayaa waxaanu aqbalayno maaha. Nin waliba Mishiinkan wuu keensan karaa, laakiinse arrimahan oo kale marka la samaynayo waa in sharciyad loo maraa oo muddo ay qaadataa, laakiinse Lacag iska bixiya wax la aqbalayo maaha”ayuu yidhi Maxamuud Sanyare.
Xoggo dheeraad ah oo ku saabsan xiisada ka taagan Dekedda
Lacagtan hubinta Gaadiidka lagu soo rogay, ayaa qaadisteedu maalmahan ka dhaqan gashay Dekedda gudaheeda. Xadiga laga qaadayo gaadiidka ayaa ah mid kala duwan. Gaadhiga Grande- loo yaqaano waxa laga qaadayaa $50 Dollar. Noocyada Seerafta iyo Landcruiser-ada waxa laga qaadayaa $80, halka Waraadka iyo wixii ka sareeya laga qaadayo Lacag caddadkeedu ka bilaabmayo $120 ilaa $200 oo Dollar.
Dhanka kale, Wax Baabuur ah lagama soo saarin gudaha Dekedda sidii arrintani u soo baxday, balse wararkii u dambeeyay ee ku saabsan Xiisada ka dhalatay Lacagta ay Shirkaddani ku soo rogtay Gaadiidka Dekedda, ayaa sheegaya inay qaar kamida Ganacsatada Macdaarada ku leh Hargeysa, ay shalay dekedda kala soo baxeen Gawaadhi ka taallay halkaasi, iyagoo bixiyey sida la sheegay lacagta ay diiddeen Gaadiidleyda kale.
Sida Wargeyska Yool ka helay ilo-wareedyo ku dhadhow Dekedda, in saddex ilaa afar Gaadhi oo ay kala leeyihiin Macdaarka Garas Motors iyo Ganacsade kale laga soo saaray Dekedda Shalay, kuwaasoo bixiyey lacagta cusub ee lagu soo rogay Gaadiidka soo dega .
Labada Ganacsade ee ku badhi-furtay go’aanka Gaadiidleydu ku diidday bixinta lacagtaas, ayaa waxa la sheegay inay xukuumaddu abaabushay, si ay ugu shiiqiso cabashada ka soo yeedhay kuwa kale ee diiday inay bixiyaan Mushqaayada tibaabinta Gaadiidka. Waxa kale oo warku intaas ku daray inay dawladdu lacagta u dhiibtay labadan Ganacsatade oo ay ka dalbatay inay Baabuurta kagala soo baaxaan, iyadoo uga gol leh inay ku docwareento cabashada xooggan ee lagaga mudaharaaday bixinta Lacagta Hubinta Gaadiidka. Sida ay xoggaha qaar tilmaamayaan labada Ganacsade ee dawladdu u isticmaashay burinta Qaraarkii Mulkileyaasha Macdaaraddu ku diidan lacagtaa, ayaa ah kuwo ganac-saar dhow leh Wasiirrada iyo xubnaha kale ee ku jira Shirkadda, isla markaana waxa lagu xushay qaab qabiilaysan si aanay qorshaha loo adeegsaday u fashilin.
Yaa leh shirkada lacagta la siinayo?
Sida ay caddeeyeen xoggo ka soo baxay Baadhitaan Bahda GNA ku samaysay cidda iska leh Shirkaddan, Wiilka Qoyska Madaxweynaha la xididka ah ee Baashe Cumar Moorgan, ayaa qaybta ugu weyn ee shirkaddan iska leh. Waxa kale oo Saamiyo ku leh Shirkadda Nin u dhashay dalka Hindiya oo magaciisa la yidhaahdo Maxamed Khan iyo Wasiirka Wasaarada howllaha Guud Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo isagu doorkiisa labaad ee Lahaanshiyaha Shirkaddu ka muuqdo qaabka Ogolaanshiyaha uu ku siiyey.
Wali Baadhistu may kala caddeyn xadiga Saamiga ay kala leeyihiin saddexda dhinac , laakiinse waxay xogta baadhistu hoosta ka xariiqday inay talaabadani tahay mid Dhaqaalle badan lagagala soo baxayo laba dhagax dhexdood, iyadoo lagu dhiig-miiranayo Baayac Mushtarka waddanka.
Xadka Lacagaha ka baxsan Cashuurta Sharciga ah
Xadiga Cashuurta Gaadiidka Dekedda ka soo dega laga qaado, ayaa sanadba sanadka ka dambeeya cirka isku sii shareerta . “Gaadhiga Lancruiser-ka ah waxay Cashuurtiisu maraysaa $3000 oo Dollar” sidaas waxa GNA u xaqiijiyey Ibraahim Cabdi Xuseen. “labadii Biloodba waxa Dekedda ka soo dega saddex kun oo gaadhi, markaa waxa la doonaya in Malaayiin Dollar oo aan Sharciyad ku fadhiyin sanad walba laga samaysto Mishiin yar iyo Laba Kombuutar oo Dekedda dhexdeeda la dhigtay.
Waxa kale oo jirtay lacag dhawaan Wasaarada Maaliyadu soo rogtay oo lagu naas-nuujiyo Khubaro Kastamka Dekedda loo geeyay inay Shaqaalaha halkaa ka howl-gala ku tababaraan nidaamka cusub ee Cashuur uruurinta iyo dejinta Maaliyada Dawladda. Ganacsatada wax kala soo dega Dekedda Berbera waxa kale oo ay ka cabanayaan lacago kale oo aanay magac u samayn, balse siday xuseen lagaga qaado meello kala duwan.